'Blood Red Sky' Trailer na-egosi ihe na-eme mgbe ndị na-eyi ọha egwu jiri ụgbọelu Vampire nọ n'ụgbọelu
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ 'Blood Red Sky' Trailer na-egosi ihe na-eme mgbe ndị na-eyi ọha egwu jiri ụgbọelu Vampire nọ n'ụgbọelu
by Trey Hilburn III June 8, 2021 3,031 echiche
Netflix na-abịa ụgbọala na-adọkpụ maka Ọbara Red Sky bu ihe m choro ka m ghara ihu. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ahụghị m ya, agaraghị m enwe ọchịchọ ọ bụla ikiri ihe nkiri ahụ. Yabụ, echere m na ọ bụ ihe ọjọọ, mana ihe ọjọ.
Na ụgbọala na-adọkpụ maka Ọbara Red Sky, a na-eme ka anyị mata nne na nwa ya nwoke nọ n'ụgbọelu n'abalị. Ndị otu egwu eyi egwu jiri ụgbọelu tọgbọ elu ụgbọelu ahụ n’ikpeazụ. Ma nwatakiri, oh oh ha choro ugbo elu na-adighi nma.
Na nchịkọta akụkọ maka Ọbara ọbara Eluigwe dị ka nke a:
Nwanyị nwere ọrịa dị omimi na-amanye ime ihe mgbe otu ndị na-eyi ọha egwu na-anwa ịchụpụ ụgbọ elu transatlantic n'abalị. Iji kpuchido nwa ya nwoke, ọ ga-ekpughe ihe nzuzo gbara ọchịchịrị, wee kpughee nnukwu anụ ọjọọ nke ọ lụrụ ọgụ iji zoo.
N'ime ụlọ ọrụ ahụ na-adọkpụ ụgbọala ị hụrụ na nne "na-arịa ọrịa" nọ n'ụgbọ bụ n'ezie ezigbo mmiri na-agụ agụụ na-achọ ịga njem n'ime abalị. Ọ hapụrụ ya enweghị nhọrọ ọ bụla ma ọ bụrụ na ọ ga-ekpughere mmụọ mmịnye ọbara ya n'isi ndị niile na-adịghị mma ezuru iguzo n'ụzọ ya.
Ọbara Red Sky mara ezigbo mma. Ana m enweta ụfọdụ Kwe Ka Onye Dị Mma Bata vibes si na ya. You nwere ike ịhụ mgbe m kwuru na ọ dị m ka ya bụrụ na ụzọ ga-esi zụta ihe nkiri a na-enweghị ikpughe na ọ bụ vampire n'ezie. You nwere ike iji ihe onyonyo lelee nke a n'amaghị? Inwe ihe ijuanya ahụ gaara abụ ihe na-akwụghachi ụgwọ. Mana, lee anyị.
Ihe nkiri a ka dị oke mma ma bụrụkwa nke m na-atụ anya ịlele.
Ọbara Red Sky kpakpando Peri Baumeister, Kais Setti, Alexander Scheer, Dominic Purcell, Graham McTavish na onye nduzi Peter Thorwarth.
You nwere obi ụtọ ịlele Ọbara Red Sky? Mee ka anyi mara na ngalaba a.
Ọjọọ Ọjọọ Ọjọọ bidoro mepụta ma kesaa foto iji mee ememme. Lelee ya ebe a.